‘गलत काम गर्ने जो कोही प्रहरीलाई कठोरतापूर्वक कारवाही गछौं’ « News of Nepal
कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा समेत घटनामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । कञ्चनपुर घटनामा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै प्रहरीका अधिकृतहरुसमेत निलम्बनमा परेका छन् । कञ्चनपुरको घटनाले प्रहरीमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
तर प्रहरी संगठनले केही पात्रका कारण सिंगो संगठनलाई विवादमा मुछ्न नहुने बताएको छ । चौथर्फी दबाब भए पनि पीडित परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसै विषयमा कञ्चनपुर घटना, देशभर बढ्दो बलात्कारको घटना र समस्या समाधानका लागि प्रहरीले गरिहेको कामको विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपक रिजाल र मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना पुग्दा समेत प्रहरीले दोषी पक्राउ गर्न किन सकिरहेको छैन ?
–कञ्चनपुरको घटना दुःखद थियो । घटनाको अनुसन्धान गर्ने काम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको हो । सुरुमा उसले नै घटनाको अनुसन्धान गर्ने काम ग¥यो । हाम्रो स्थानीय नेतृत्व केही कुरामा अलिकता लाप्रवाह देखियो । निर्मला पन्त हराइन् भन्ने कुरा आउनासाथ खोज्नका लागि लाग्नु पर्दथ्यो ।
प्रहरीले पीडित परिवारसँग राम्रो व्यवहार नगरेको देखियो । त्यही भएर हामीले प्रहरी उपरीक्षक दिल्ली विष्टलाई काम गर्न नसकेकोमा निलम्बन ग¥यौं । अहिले हाम्रो अनुसन्धान र छानविनको दायरामा हुनुहुन्छ ।
लगत्तै हामीले प्रहरीले त्यहाँ नयाँ टिम खटायौं । नयाँ टिमलाई सहयोग गर्न प्राविधिक रुपमा विशेषज्ञ पनि खटाएका छौं । अधिकृतहरु पनि खटिएका छन् । महिला तथा बालबालिका सम्बन्धित अपराध भएर महिला अधिकृतलाई पनि खटाएका छौं । यसरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरको घटनामा प्रवेश गरेर विशेष सहयोग गरेको छ । यो अपराधमा संलग्न अपराधीलाई चाँडोभन्दा चाडो सार्वजनिक गर्ने काम जारी छ । आगामी दिनमा सफल अनुसन्धानसहित अभियुक्त सार्वजनिक गर्छौं ।
प्रहरीले नै कञ्चनपुर घटनाको प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाएका छन् नि ?
–तत्कालीन अवस्थामा खटिएका प्रहरी अधिकृत र प्रहरीको भूमिका के रह्यो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय निकै गम्भीर छ । त्यही भएर हामीले अपराध अनुसन्धान विभाग पनि हेर्नु हुने प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरु बस्नेतको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेका छौं ।
छानविन समितिले अनुसन्धानमा भएको लापरवाही पनि अध्ययन गर्नेछ । यदि प्रमाण नष्ट गरेको हो भने कसुरअनुसार कारबाही हुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गैरव्यावसायिक काम गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्छ ।
हत्याजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रहरीले किन समयमा नै ध्यान दिन सकेन ?
–यो घटना साउन १० गते भएको छ । हाम्रो सीआईबीको टोली तीन दिनभित्र त्यहाँ पुगिसकेको थियो । महिला तथा बालबिालकाविरुद्ध हुने कुनै पनि हिंसात्मक घटनाका अपराधी पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर हामी सचेत छौं ।
कञ्चनपुर घटनाले प्रहरीमाथि नकारात्मक धारणा बनेको छ । पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–नेपाल प्रहरीको विकल्प थप व्यावसायिक नेपाल प्रहरी नै हो । यसको अर्को कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । कानुन कार्यान्वय गर्ने क्रममा एकल जिम्मेवारी भनेको प्रहरीलाई दिइएको छ ।
जसरी कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीप्रति विभिन्न ठाउँमा विरोधका कार्यक्रम पनि भए । यसले के देखाएको छ भने आम नागरिकहरु नेपाल प्रहरीले गर्ने कामप्रति प्रत्यक्ष चासो राख्नुहुन्छ र यो संगठनले गलत काम नगरोस् भनेर पहरेदारी गरिरहनुभएको छ ।
यसलाई हामीले सहज रुपमा ग्रहण गरेका छौं । यो घटनाले आगामी दिनमा थप व्यावसायिक बन्नका लागि सकारात्मक दबाब सृजना गरेको छ ।
पुरानै अवस्थामा फर्काउने तर्फ निकै सचेत छांै । विगत चार महिनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हामीले लागूऔषध बरामद गर्ने काममा दोब्बर प्रगति गरेका छौं । शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने सीके राउत, विप्लव समूहका १ सय २५ का नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेका छौं ।
साना हातहतियार दोब्बर बरामद भएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि प्रहरीले उल्लेखनीय काम गरेको छ । सकारात्मक काम पनि मनग्य भएका छन् । जबरजस्ती करणी भनेको महिलाको अस्मितासँग जोडिएको कुरा हो । यसलाई कुनै हालतमा मिलमेतो गर्ने र सम्झौतामा टुंगो लगाउन हुँदैन भनेर परिपत्र गरेका छौ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने काममा कनै पनि कमिकमजोरी नहोस् भनेर परिपत्र पनि गरेका छौं ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले निकट भविष्यमा नै जबरजस्ती करणीको सम्भावित समूहलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाइरहेका छौं । यस कार्यमा प्रहरी झन् बढी सक्रिय भएर लाग्दा आगामी दिनमा पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ।
कञ्चनपुरको घटनाको बारेमा प्रहरीलाई जानकारी छ । प्रहरीले अपराधी पक्राउ गरिरहेको छैन भन्ने आम जनताको आरोप छ नि ? सत्य के यही हो ? यत्रो आक्रोश बढ्दा पनि किन अपराधी पक्राउ गर्न सक्नुहुन्न ? प्रहरीले सार्वजनिक गरेको व्यक्ति नै नक्कली प¥यो नि ?
–शक्तिशाली व्यक्ति नेपथ्यमा बसेर यो सब गरिरहेको छ भन्ने आएको छ । पीडितको परिवारले प्रहरी महानिरीक्षलाई भेटनुभएको छ । गृहमन्त्रीलाई भेटनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको छ । उहाँहरु सबैले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छौं भन्नुभएको छ । यो अपराध शक्तिशाली व्यक्तिले भन्दा पनि चतुर व्यक्तिले गरेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।
त्यसकारणले चतुर मानिसले गरेको अपराधमा जटिलताहरु हुन्छन् । तर अन्ततः ती पत्ता लाग्छ र कानुनी कठघरामा ल्याउँछौं । जहाँसम्म गलत व्यक्ति सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा आयो । हामीले अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरेका छौं । वैज्ञानिक प्रयोगले दिलीपराज विष्ट होइन भन्ने प्रमाणित भएकाले छोडेका छौं ।
–जबरजस्ती करणीको घटना नियन्त्रण गर्न पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्छ
डीएनए मिलेन भनेर स्वीकार ग¥यो त्यो आफैंमा अभूतपूर्व हो । किनभने प्रहरीले स्थानीय निकायले यो मानिस हो भनेकोमा केन्द्रीय निकायले डीएनए रिपोर्टबाट होइन भन्ने आँट पनि निष्पक्षताको काम हो । सामान्यता स्थानीय तहबाट हुने कुरालाई माथिल्लो निकायले हो भन्ने चलन थियो । हामीलाई डीएनए मिल्दैन भेनर बाहिर लैजाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने थाहा थियो । तर निर्दाेष व्यक्ति पर्नु हुँदैन भनेर संगठनले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने काम गरेन । डीएनए नमिलेको हदसम्म कोही व्यक्तिलाई ल्याउन सक्ने अवस्था छैन् । स्थनीय प्रहरीमार्फत एकचोटि धोका खाइसकेको अवस्था छ । फेरि पटक–पटक धोका खाने पक्षमा छैनौं । हतारोमा निर्दोष मानिस नपरोस् भन्ने चाहिरहेका छौं ।
अपराधमा संलग्नलाई छिटो पक्राउ गर्न चारैतिरबाट प्रेसर छ ? तर तपाईको भनाइअनुसार त अझै समय लाग्ने देखियो नि होइन ?
–हामीसँग वर्षांै लगाउने सुविधा छैन् । हामी सकभर छिटो गर्ने पक्षमा छौं । तत्कालिन अवस्थामा अनुसधान्मा देखिएको लापबाही अभियुक्तको चतुरपना देखिन्छ । यो घटनाको दोषी सार्वजनिक गर्न हामीलाई बढी हतारो छ । किनभने प्रहरीमा आएको क्षयीकरण रोक्न प्रहरी त लाग्ने नै छ । हतारो हामीलाई छ । बडिखेल, रानीवारी घटना, रणबहादुर बम घटनाको अनुसन्धान गर्न पनि लामो समय लागेको थियो । अहिले बर्षौ लगाउने पक्षमा छैनांै । अनुसन्धानमा केही जटिलता थपिएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छौं ।
पन्तको हत्याको अभियुक्त जोगाउन होटलको सिसी क्यामरोको फुटेज डिलिट गर्ने काम भएको पीडित परिवारले दाबी गरेका छ, यदि होइन भने प्रहरीले कि विज्ञप्तिसमेत जारी गर्दैन ?
–अनुसन्धानमा रहेका कतिपय तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नुहुन्न । सूचनाको २०६४ सम्बन्धी ऐनले पनि यो व्यवस्था गरेको छ । नेपाल प्रहरीको मिडिया पोलिसी पनि त्यही हो । अनुसन्धान भइरहेको बेला तथ्यहरु बहिर ल्याइदिनु हुन्न । सामाजिक सञ्जालमा आएको धारणालाई छानबिन समितिले हेर्छ । अहिले अभियुक्त ठहर नभएको अवस्थामा सबै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यसकारण सबै कुरा बाहिर नल्याएको पनि हो ।
बलात्कारका घटना बढनुमा के कारणले काम गरिरहेको छ ?
–विगत सात वर्षको डाटा हेर्ने हो भने महिला तथा बालबालिकाको विरुद्ध अपराध बढेको देखिन्छ । गत वर्षको तथ्यांक र यस बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीको घटना तीस प्रतिशतले बढेका देखाउँछ ।
जबरजस्ती करणको घटना बढ्नुमा थुप्रै कारण छ । पहिलो कारण महिला हिंसा तथा जबरजस्ती करणको घटनामा कुनै पनि प्रहरीले लापरवाही गरेको अवस्थामा संगठनले तत्काल कारवाही ग¥यो । उदाहरणका लागि दरवामार्ग, सुनसरी, कञ्चनपुरको घटना हेर्दा हुन्छ । जसको कारण प्रहरीप्रति विश्वास बढेर दर्ता गर्ने क्रम नै बढयो । अहिले महिलामा जनचेतनता बढेको छ ।
समाजले अहिले के ठान्यो भन्दा अपराध सहेर बस्ने चिज होइन । यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरु प्रहरी कार्यालयसम्म आइपुग्यो । तेस्रो आजभोलि इन्टरनेटमार्फत धेरै कुरा पाउन सकिन्छ । इन्टरनेटमा बालबालिकाले सकारात्मक नकारात्क दुवै कुरा पाउँछन् ।
यो घटना बढनुमा अभिभावको भूमिका पनि पुनरमूल्यांकन हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । अभिभावकले स्मार्ट फोन, ल्याबटप, किनिदिनु भो । तर आफ्ना छोरोछारीले इन्टरनेटमा के हेरिरहेका छन भन्ने कुरामा खासै चासो राख्नु भएको पाइँदैन ।
–कञ्चनपुर घटनामा पुनः हतारोमा निर्दोष मानिस नपरोस् भन्ने चाहिरहेका छौं
अपरिपक्क दिमागले परिपक्क साइट भिजिट गरिदिदा खेरि यस प्रकारको गतल बाटो रोज्ने गर्छन् । अहिले सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमा बन्दै छ । सामाजिक सञ्जालमा भएको चिनजानकै कारण पहिलो भेटमा नै बलात्कारमा परेको घटना पनि छ ।
चोथौ कारण मूल्य मान्यतामा आएको बिचलन पनि हो । नयाँ पुस्ताले क्रमश नैतिकता भुल्दै गएको छ । निर्मला पन्त दिउँसो साथीको घरमा गएको देखिन्छ । घरबाट फर्किएको छ । बाटोमा सुरक्षा दिने प्रहरी थिएन । तर समाज, बाटो छेउछाउका मानिसहरु थिए । अहिले जुन प्रकारले समाज रुपान्तरण हुँदै गएको छ त्यसले पनि जबरजस्ती करणीको घटना बढाएको छ ।
बलात्कारबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा पनि बुझाउन जरुरी होला नि होइन ?
–हामीले जबरजस्ती करणीको घटना नियन्त्रण गर्न दशवटा जति विषयवस्तु बनाएका छौं । यसमा मुख्य त सुरक्षाकै कुरा हो । सात कक्षामा पढ्नेले प्रहरीमा उजुरी गर्न नसके पनि शिक्षक अभिभावकलाई भन्न सक्छ । यदि गलत नियत राखेको बारेमा कसरी थाहा पाउने ? १०० नम्बरमा कसरी कल गर्ने भन्ने सिकाउँछौ ।
१२ कक्षासम्म जाने सोच बनाएका छौ । यदि अभियुक्तले पक्राउ नै गरिहाल्यो भने प्रतिवाद कसरी गर्ने योजना बनाएका छौ । शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जाने सोचिरहेका छौ । आत्मरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई पाठयक्रममा नै समावेश हुनुपर्छ । शैक्षिक सत्रमा पढाइनुपर्छ ।
बलात्कारको घटना कसरी घटाउन सकिन्छ त ?
–गत बर्ष ६२ प्रतिशत बलात्कारको घटनामा परिचितहरु संलग्न भएको देखिन्छ । घटनाको अनुसन्धान गर्न बीचमा मौका हुनुपर्छ । तर परिवारकै सदस्य, विद्यालयका शिक्षक, ब्याइफ्रेन्ड, साथी साथीमा अनुसन्धान गर्ने कुरा मुस्किल हुने गरेको छ ।
त्यसको रोकथाममा प्रहरी एक्लैको प्रयास चाहीँ काफी नहुदो रहेछ । परिवारको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । समाजको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । इनजीओ आईएनजीओको, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका पनि जिम्मेवारी हुन्छ । यसरी जोडिदै गयो भने रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
जबरजस्ती करणको घटना घटाउनको लागि हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौ । ११ देखि १७ बर्षको उमेर समुह सबै भन्दा पीडित समुह छ । ३३ देखि ४९ प्रतिशत पीडितहरु यो उमेर समुहका छन् । २५ बर्ष पु¥याउने हो भने ७० प्रतिशत पुग्छ । हामीले स्कुलमा जाने विषय सोचेका छौ । अभिभावकालाई बुझाउने कुरा सोचेका छौ । यसरी जादा पुरै समाजमा उदेलित भएर समाजसँग जुध्ने प्रयास भयो भने घटाउन सकिन्छ ।
सामाजिक कारणले कतिको काम गरेको छ ?
–हामी आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुने नाममा समाजका सुन्दर मुल्य मान्यताहरु क्रमश भत्काउदै गएका छौं । एकअर्कोलाई गर्ने सम्मान खण्डित भएको छ । एक अर्कोलाई गर्ने मर्यादा खण्डित भएका छ । यो राम्रो पक्ष होइन । गत वर्षसम्म १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आगामी दिनमा बढछ । अहिले नयाँ ऐन डाफ्टमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । १६ बर्ष नपुग्दासम्म फेसबुकको खाता खोल्न पाइदैन । तर दस बर्षको बालबालिकाले फेसबुक चलाउँछ । यौन दुराचारको घटनामा विदेशीले आफ्नो भिक्टिम सामाजिक सञ्जालमा खोज्ने गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको कारणले पनि यस्तो घटनामा वृद्धि भएको हो ?
–सामाजिक सञ्जाल भनेको ठूलो पोखरी हो । यहाँ जब असहाय बालबालिका प्रवेश गर्छन् अर्थात खाता खोल्छन । डिलमा रहेका अपराधीहरु बल्छी हालेर बस्छन् । आम अभिभवकाहरुले मेरो बच्चाले खाता खोल्यो भनेर दंगा पर्नु भन्दा पनि उमेर नपुगी फेसबुक चलाउन दिन हुन्न ध्यान राख्ने हो भने ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
–प्रहरीले कानुनको उल्लंघन गर्न पाउँदैन र गर्न दिनु हुँदैन
केही पात्रका कारण प्रहरी संगठन नै बदनाम हुँदै गएको हो ? संगठनभित्र गलत काम गर्नेलाई के साँच्चीकै कारबाही भएको छ त ?
–अहिले प्रहरीमा ७५ हजार फोर्स छ । सबै दूधले धोएका हुँदैन । कतिपय मानिसहरु गलत नियतका हुन्छन् । कतिपय प्रसगमा उनीहरुले गलत काम गरेका छन् । विगत बर्षको तथ्यांकअनुसार २२ सय ६५ जना प्रहरी कर्मचारीहरुलाई विभिन्न प्रकारका कारवाही भएको छ ।
चार महिनाको अवधिमा ४ सय ९५ जना प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गरेका छौं । प्रहरी भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । उसले त कानुनको उल्लंघंन गर्न नै पाउदैन र गर्न दिनु हुँदैन । गैरव्यावसायिक काम गर्ने जो सुकै प्रहरीलाई पनि कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रतिबद्ध छ ।
बर्दी लगाएर अपराध गर्नुपर्छ भन्नेलाई लुकाउनु पर्ने पक्षमा हामी छैनौ । हामी कोही कसैले संगठनभित्र गलत काम गरेको अवस्थामा कठोरता र निर्मतापूर्वक सजाय दिन्छौ । संगठनको विकास भनेको सुधारउन्नमुख हुन्छ । कतै हावा कमजोर भएको छ भने हावा हाल्छांै ।
नट पनि टाइट गर्छौं । संगठनलाई अग्रगमनमा लैजान्छांै । चेन अफ कमाण्डलाई बलियो छ । अझै बलियो हुन्छ ।
संगठनले नै बाटो बिराउन लागेको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ नि ?
–यदाकदा कुनै मुद्दामा गल्ती गरेको होला । तर विगत हेर्ने हो भने ३९ हजार मुद्दाहरु अनुसन्धान गरेका छौ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा दुई वटा केसमा चुक्यौ होला । त्यसैलाई कारण बनाएर संगठनको विरुद्ध राय बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । नेपाल प्रहरी नागरिकप्रति प्रतिबद्ध छ । नागरिक केन्द्रीत काम गरिरहेका छौ ।
६ सय ३९ स्थानमा प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न माग छ । १०० नम्बरमा दैनिक ११ सय भन्दा बढी फोन सहयोगको लागि आउछ । प्रहरी ठिक ठाउँमा छ । यदाकता देखिने घटनाले प्रहरीको मनोबल पनि कमजोर भएको छैन् । आगामी दिनमा नेपाल प्रहरी उच्च व्यवसायिक सहित प्रस्तुत हुन्छ ।
नागरिकहरुलाई मेरो आग्रह छ प्रहरीले गर्ने कामको निष्पक्ष मुल्याङकन गरिदिनुहोस । आपत पर्दा अहिले पनि प्रहरी तपाईहरुको घरदैलोमा आइपुग्छ ।